Nagarik Shukrabar - 'हिट र फ्लप गन्नुभन्दा गुणात्मकताको चर्चा राम्रो' : नवीन सुब्बा
'हिट र फ्लप गन्नुभन्दा गुणात्मकताको चर्चा राम्रो' : नवीन सुब्बा
शुक्रबार, ०३ जेठ २०७६, ०६ : २९ | अनिल यादव
नवीन सुब्बालाई नेपाली फिल्मका गम्भीर चिन्तक भन्दा फरक नपर्ला । अहिलेसम्म उनले दुई वटा फिल्म निर्देशन गरेका छन्, ‘नुमाफुङ’ र ‘गुडबाई काठमाडौं’ । ‘गुडबाई काठमाडौं’ अझै सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउन सकेको छैन । तर नविनले ‘नुमाफुङ’बाट कमाएको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति अझै उस्तै छ । जातीय छुवाछूतविरुद्ध उनले बनाएको टेलिसिरियल ‘दलन’लाई दर्शकले अझै बिर्सन सकेका छैनन् । नेपाली फिल्मको वर्तमान परिस्थिति र विविध आयाममाथि उनीसँग अनिल यादवले गरेको कुराकानी :
दर्शकले ‘नुमाफुङ’पछि तपाईंको अर्को फिल्म हेर्न पाएका छैनन् । ‘गुडबाई काठमाडौं’ निर्देशन त गर्नुभयो तर दर्शकले कहिले हेर्न पाउने हो ?
बनेको त धेरै भयो । प्रवासी नेपाली र विदेशी फिल्म फेस्टिभलहरुमा त प्रदर्शन भइरहेकै छ । नेपालमा मात्रै प्रदर्शन बाँकी हो । तयारी हुँदैछ ।
फिल्म निर्देशनमा तपाईंको निकै ठूलो ग्याप किन ?
मैले कामै नगरेको त होइन । लामो लामो सिरियलहरु निर्देशन गरेको छु । फिल्ममा अलिकति टाइम लागेकै हो । मलाई फेरि फिल्मका लागि फिल्म गर्न मन छैन । अब ‘नुमाफुङ’ जस्तै अर्को फिल्म बनाउनुको कुनै अर्थ छैन । पृथक् केही गर्न सकियोस् । पहिलो त आफैँलाई ‘एक्स्प्लोर’ गर्न खोज्दाखेरी टाइम लाग्यो । दोस्रो हाम्रोजस्तो विषयमा काम गर्दा स्रोत जुटाउन पनि गाह्रो हुन्छ । तेस्रो हामीकहाँ टेक्निकल समस्या पनि छ । प्राविधिक उपलब्धता छैन ।
जस्तो, राम्रा स्टुडियोहरु छैनन् । साउन्ड, कलर करेक्सनका लागि उपयुक्त स्टुडियोहरु छैनन् । जस्तो, ‘फुली’ नै गर्नका लागि ‘फुली आर्टिस्ट’हरु छैनन् । राम्रो जनशक्ति अभाव छ ।
बजारमा अहिले जस्ता फिल्म चलिरहेका छन्, तपार्इंको फिल्म तीभन्दा फरक भएका कारण प्रदर्शन गर्न डराइरहेको त होइन ?
त्यस्तो होइन । विदेशमा रहेका नेपाली समाजतिर त प्रदर्शन भइरहेको छ । हङकङ, अस्ट्रेलिया लगायतका थुप्रै देशतिर भइसक्यो । मलाई यहाँ हलमा प्रदर्शन हुनु/नहुनुले खासै अर्थ राख्छ जस्तो लाग्दैन । दर्शकमाझ पुग्नु मुख्य कुरा हो । पुगिरहेको छ, पुग्ने क्रममै छ । म स्वयं दर्शकहरुसँग निरन्तर अन्तरक्रियामै छु । त्यसैले दर्शकसँग फेस गर्न डराएर या एक प्रकारको भयका कारण प्रदर्शन नगरेको भन्ने हुँदै होइन ।
फिल्मवृत्तमा तपाईंबारे अर्को एउटा टिप्पणी पनि छ । त्यो के भने तपाईं आफैँ नेपाली फिल्ममा यो भएन, त्यो भएन भन्दै खरो टिप्पणी र चिन्ता व्यक्त गरिरहनुहुन्छ तर आफैँ भने फिल्म निर्देशनमा आउन डराउनुहुन्छ । सत्य हो ?
आलोचना र टिप्पणी त गर्न पाइन्छ । तर मेरो हकमा किन ढिलो भएको त्यो मैले अघि भनिसकेँ । बजारले फिल्म मन पराउनु/मन नपराउनु, स्वीकार गर्नु या नगर्नु मेरा लागि सेकेन्डरी हो । प्राइमरी कुरा भने नेपाली फिल्मको स्तरोन्नति नै हो । त्यसलाई भाषिक रुपमा समृद्ध र शक्तिशाली बनाउने भन्ने हो ताकि विदेशी सिनेमाहरुसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकियोस् । कम्तीमा यो हिसाबले प्रयास त हुनुप-यो । सफल हुनु/नहुनु अर्कै कुरा !
ठीकै छ, अब थोरै नेपाली फिल्मको ट्रेन्डबारे कुरा गरौँ । यहाँ वर्षेनी सय जति फिल्म बनिरहेका छन्, तर मुस्किलले पाँच वटा फिल्मले लगानी उठाइराछन् । कारण के होला ?
त्यसलाई त्यसरी हेर्नुहुँदैन होला भन्ने लाग्छ । बलिउडलाई नै हेर्ने हो भने त्यहाँ वर्षेनी सयौँको संख्यामा फिल्महरु बन्छन् । प्रतिशतमा हिसाब गर्ने हो भने त्यहाँ लगानी उठाउने फिल्म त यहाँको भन्दा कम हुन्छ होला । खासमा फिल्म कति चल्यो, कति चलेन भनेर बहस गर्नु नै मलाई ठीक लाग्दैन । मिडियाले पनि खासमा चर्चा गर्नुपर्ने त फिल्मको गुणात्मकता माथि हो । बजारले स्वीकार ग-यो कि गरेन भनेर बजारको पछि दगुर्नु खासमा ठूलो समस्या हो । नेपाली फिल्महरु कत्तिको गुणात्मक बने, बरु त्यो भने चिन्ता र चासोको विषय हुनुपर्छ । धेरै बन्ने, थोरैले लगानी उठाउने ट्रेन्ड त विश्वव्यापी नै हो । चाइनिज, कोरियन सबैतिर त्यस्तै हो । कुनैकुनै भने साँच्चिकै उदाहरणीय देश छन् । जस्तो, पोर्चुगल वर्षमा २५ वटा जति फिल्म बनाउँछ अनि २५ वटै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रशंसित बनाउँछ, बजारमा चल्छ पनि । फेरि पनि भन्छु, हिट र फ्लपको संख्या गन्नुभन्दा पनि गुणात्मक सिनेमाहरुको चर्चा गर्दा फाइदा हुन्छ ।
कस्ता सिनेमाहरुलाई गुणात्मक मान्ने ?
ठ्याक्कै यो भन्ने त हुन्न । तपाईं कस्तो साहित्यलाई राम्रो मान्नुहुन्छ ? कस्तो संगीतलाई राम्रो ठान्नुहुन्छ ? कस्तो पेन्टिङलाई क्रिएटिभ मान्नुहुन्छ ? चलचित्रलाई पनि त्यस्तै दृष्टिले हेर्नुपर्छ । यसलाई रमाइलो गर्ने माध्यम मात्रै ठानियो भने त्यो यो माध्यम प्रतिकै ठूलो अन्याय हुन्छ । चलचित्र त हामीले मात्रै बनाइरहेका छैनौँ, संसारभर बनिरहेका छन् । संसारभर कस्ता चलचित्र गुणात्मकको सूचीमा छन्, त्यो अध्ययन गर्न सकिन्छ । राम्रा चलचित्रले त सधैँ समाजसँग अन्तरसंवाद गरिरहेका हुन्छन्, इतिहाससँग अन्तरसंवाद गरिरहेका हुन्छन्, भविष्य पनि कल्पना गरिरहेका हुन्छन् । मानवीय व्यवहारलाई नै प्रस्तुत गरिरहेका छन् । भाषिक रुपमा कति स्तरीय बन्यो, त्यसको कलात्मक उचाइ कति छ, त्यसको आधारमा फिल्मको गुणात्मक मापन गरिन्छ । अमेरिकामा कति फिल्म फ्लप भयो भनेर चर्चै हुँदैन । बरु स्पिलवर्गले कस्तो फिल्म बनाए, ड्यानियल डे–लेविसको एक्टिङ कस्तो थियो भने छलफल गर्छन् । तर हामी यहाँ यस्तो छलफल गरिरहेका छैनौँ, कुन फिल्म फ्लप भयो, कुन हिट संख्या गन्नमै मख्ख छौँ । यो सुखद् संकेत होइन ।
तर, विश्वभर ‘एभेन्जर्सः इन्डगेम’ले कति कमायो, त्यसको पनि चर्चा भइरहेको छ, होइन र ?
एभेन्जर्सले कति कमायो त्यसको चर्चा त भइरहेको छ तर त्यसको कमाइको आधारमा हलिउडको गुणात्मकताको मापन भने भइरहेको छैन । हलिउडमा यति पैसा कमायो भनेर चर्चा गरिनुलाई गौरवान्वित विषय भने मान्दैन । पछि अस्कर अवार्डमै हेर्नुहोला, यो फिल्मले मुस्किलले कुनै विधामा उपस्थिति जनाउला ।
हामी यहाँ जस्ता सिनेमालाई राम्रा र गुणात्मक भनिरहेका छौँ, त्यस्तो सिनेमा हाम्रो बजारले किन रुचाइरहेको छैन । यसमा कस्तो मनोविज्ञानले काम गरिरहेको हो ?
फेरि हामी बजारमै पुग्यौँ है (हाँस्दै) ! हाम्रो नेपाली राजनीति, नेपाली मिडिया, नेपाली प्राज्ञिक क्षेत्र जस्तो छ, हाम्रो बजार त्यसकै प्रतिविम्ब हो । अमेरिकी बजारमा त अलेजान्द्रो गोन्जालेज इनारितु, अल्फान्सो कुरान जस्ता कलात्मकतामा विश्वास राख्ने मेकर्सका फिल्म आउँदा भव्य चर्चा हुन्छ त, भव्य रुचाइन्छ पनि । हाम्रो मिडियाको समस्या के छ भने अल्फान्सोको फिल्म ‘रोमा’माथि लेख्दाधरी फिल्म चलेन भनेर लेखियो । तर, ‘रोमा’कस्तो थियो भनेर छलफल नै गरेनौँ । भाषिक रुपमा त्यसले के उपलब्धता हासिल ग-यो, जान्नै खोजेनौँ । फिल्मको स्तर अघि बढाउन त्यसले के योगदान पु-यायो, छलफल नै गरेनौँ । मात्रै बजारमा चलेन भन्यौँ । तर यो खासमा बजारमा पनि चलेकै हो । स्पेनी भाषामा बनेको यो फिल्म संसारभर एकदमै धेरै हलमा रिलिज भएको थियो । पैसा पनि राम्रै कमाएको थियो । अमेरिका बाहेकको भाषाको फिल्मले पनि यसरी धुम मच्चाउनु चानचुने कुरा होइन । तर विडम्बना हामीले यसरी हेरेनौँ । खासमा यो हाम्रो रुचिको स्तरको समस्या हो । नत्र हामीकहाँ किन सस्ता कमेडी चलचित्रहरु चलिरहेका छन् ? अत्यन्तै भद्दा संवाद बोकेका चलचित्रहरु किन चलिरहेका छन् ? के गर्ने, यो हाम्रो रुचिको स्तर हो । हामी जे मन पराइरहेका छौँ, त्यो हामी बसेकै समाजको रिफ्लेक्सन हो । हामीले राम्रो फिल्म बनाउन नसक्नुको कारण पनि हाम्रो समाजकै रिफ्लेक्सन हो । हाम्रो समाज राम्रो साहित्य पढ्न थाल्यो, राम्रो संगीत सुन्न थाल्यो, राम्रो पेन्टिङ हेर्न थाल्यो भने स्वाभाविक रुपमा राम्रो फिल्म हेर्न थाल्छ । त्यसको बोध पनि गर्छ । सिनेमामा कलात्मकता खोज्न पनि थाल्छ ।
हामीकहाँ दर्शकको रुचि भने ‘६क्कापञ्जा’, ‘शत्रुगते’, ‘ए मेरो हजुर–३’जस्ता फिल्ममा देखिन्छ । ‘६क्कापञ्जा’सिरिजले त अप्रत्यासित व्यापार गरिरहेको छ । यस्ता फिल्ममा दर्शकको यतिविघ्न रुचि किन छ ?
अहिले हाम्रो साक्षरता दर कति छ ? त्यही ६५–७० को हाराहारी होला । यसको अर्थ, शिक्षामा हामीले सोचेजस्तो फड्को मार्न सकेनौँ । त्यस्तै, हामीकहाँ सिनेमा चल्न थालेको नै कति वर्ष भयो र ? त्यही ५० वर्षजति भयो । त्यसमा पनि कुल जनसंख्याको कति प्रतिशतले सिनेमा हेर्न हल जालान् ? तीन प्रतिशतभन्दा बढी छैनन् । त्यो पनि शहरमा धेरै छन् । यसको अर्थ हामीकहाँ सिनेमा हेर्ने जनसंख्या नै कम छ, अनुभव पनि कमै छ । त्यसमाथि हामी सिनेमा हेर्नलाई प्रशिक्षित पनि हाम्रै फिल्मबाट भएका होइनौँ, बलिउडबाट भयौँ । फिल्म भनेको कस्तो हुनुपर्छ ? बलिउडको जस्तो हुनुपर्छ । फिल्ममा के के हुनुपर्छ भन्दा बलिउडको जस्तो चार पाँचवटा गीत, फाइट, रोनाधोना र कमेडी हुनुपर्छ भन्ने प्रशिक्षणबाट हाम्रा दर्शकहरु तयार भएका हुन् । अझ त्यतिबेला नेपाल टेलिभिजन नै सस्तोमा हिन्दी फिल्म ल्याएर देखाउँथ्यो । सस्तो खोज्ने बहानामा उसले पनि स्तरीय हिन्दी फिल्म देखाएन । २०–२५ हजार आइसीमा जसले फिल्म दिन्छ, त्यो ल्याएर देखाइयो । यसको अर्थ त्यहाँका पनि खराब चलचित्र यहाँ ल्याएर देखाइयो । हलहरुमा पनि हिन्दी फिल्म नै देखाइन्थ्यो । अनि त्यस्ता चलचित्र हेरेर प्रशिक्षित भएका हाम्रा दर्शकले ‘६क्कापञ्जा’ जस्ता फिल्म किन नहेरुन् ! रुचिको स्तर यस्ता फिल्महरुमा हुनुको मुख्य कारण भने यही हो । यहाँ त अहिले पनि हाम्रा धेरै दर्शकमाझ फिल्म भनेको मद्रासी फिल्मजस्तो हुनुपर्छ भन्ने छाप बसिरहेको छ । हुन त साहित्य पनि त्यही त हो नि ! मान्छेले सुरुमा पढ्ने भनेकोे सजिलो साहित्य नै त हो । एकैचोटी पारिजात, इन्द्रबहादुर राई, ध्रुवचन्द्र गौतम पढ्न थाल्यो भने त गाह्रो भइहाल्छ । फिल्ममा पनि यस्तै हो, बिस्तारै रुचिको स्तर बढ्ला भन्ने आशा गरौँ । बजारले स्वीकारोस्/नस्वीकारोस् राम्रा फिल्म बनाउन भने छाड्नुहुन्न ।
नेपाली फिल्मको स्तरोन्नति हुन नसक्नुको खास कारण भने के देख्नुहुन्छ ?
खासमा हामी सतहीमा मात्रै चर्चा गरिरहेका छौँ, खासगरी फिल्मको नीति निर्माणमै समस्या छ । परिचयात्मक अन्तरक्रियाहरु भएका छैनन् । प्राज्ञिकहरुले फिल्मलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन । म आफैँले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा फिल्म फेस्टिभलका लागि ठाउँ माग्न जाँदा फिल्मका लागि ठाउँ छैन भन्ने जवाफ पाइयो । उनीहरुका लागि फिल्म त प्राज्ञिक विषय नै होइन । जब एउटा समाजशास्त्रीले चलचित्रलाई लिएर बहस गर्न थाल्छन्, अहिले खुब चलेको छ नि महिलावाद, महिलावादीहरुले जब चलचित्रमा हस्तक्षेप गर्न थाल्छन्, जब प्राज्ञिकहरुले चलचित्रलाई लिएर प्राज्ञिक रुपमा बहस गर्न थाल्छन्, त्यसपछि कहाँबाट टिक्छ मनोरञ्जन ? त्यसपछि फिल्मलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आफसेआफ परिवर्तन हुन्थ्यो । एक त हामीकहाँ फिल्मप्रति गहिरो बुझाइ हुने प्राज्ञिकहरु पनि भएनन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो कोर्समै फिल्म विषय राखेर छुट्टै पढाउन थाल्ने हो, राज्यले फिल्मसम्बन्धी पाठ्यक्रम बनाउने हो, फिल्म स्कुलहरु खोल्ने हो भने अवस्था यस्तो हुन्थेन । बजारबाट निर्देशित चलचित्रहरुले आफूलाई सुधार्न, आफूलाई मानवीयकरण गर्न आवश्यक छ । बजारकै लागि चलचित्र बनाउनेहरु पनि त्यो खालको चलचित्रहरुमा कलात्मक उचाइ प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । हामीकहाँ त्यो प्रयाससम्म नगर्नु समस्या हो । कम्तीमा फिल्म टेक्निकल्ली त राम्रो हुनुपर्यो नि ! क्यामेरा राम्रो चल्नुपर्यो । कलर राम्रो हुनुपर्यो । क्यामेरा चलाइको अर्थ थाहा हुनुपर्यो । पटकथा बलियो र मौलिक हुनुपर्यो । प्राविधिक रुपमा त अब्बल हुनुपर्यो नि ! एक्सन फिल्म नै बनाउँदा पनि साउन्डमा खोज गर्न सकिन्छ नि ! बक्सिङको आवाज ढिच्क्याउँ हुन्छ कि प्याट्ट हुन्छ या के हुन्छ ? खोज त गर्नुपर्यो । सबै सिनमा हेभी म्युजिक राखेर त भएन नि !
समीक्षकले फिल्मप्रति आलोचना गरेपछि हामीकहाँ त फिल्मकर्मीको सधैँ पुरानै रटान सुनिन्छ, ‘फिल्म भनेको मनोरञ्जनका लागि हो’, ‘दर्शक नै मेरा भगवान हुन्’ । यसमा तपाईंको राय ?
अल्पज्ञानको कुनै उपचार हुँदैन । मान्छेले जति आफ्नो क्षितिज देख्छ, त्यति नै भन्ने हो । पछिल्लो समय फिल्मलाई लिएर नेपाली फिल्मकर्मीको जस्तो प्रतिक्रिया आइरहेको छ, त्यो त्यसकै परिणाम हो ।
त्यही त हामीकहाँ फिल्म समीक्षकहरु फिल्मकर्मीको तारो मात्रै बनिरहेका छन् । झरना थापाले फिल्म समीक्षालाई लिएर हालै एक इन्टरभ्युमा करिब १५ मिनेट जति सत्तोसराप गरिन् । उता प्रदीप खड्काले समीक्षकले फिल्म निर्मातासँग सल्लाह गरेर एक हप्तापछि समीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव दिए । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
साँच्चै यदि कसैले इमान्दारीका साथ चलचित्र क्षेत्रको विकास चाहन्छ भने त्यसलाई समीक्षकलाई गाली गर्नु पर्दैन । लामो समयदेखि जसरी नेपाली समीक्षकले नेपाली फिल्मप्रति आलोचना गरिरहेका छन्, त्यसको कारणले नै हो यहाँ अहिले ‘हरि’ र ‘बुलबुल’जस्तो चलचित्र बनिरहेका छन् । ‘६क्कापञ्जा–३’ अघिल्ला सिरिजभन्दा सुधारिएर आउनुको कारण पनि यही नै हो । हामीले समीक्षाको शक्ति, महत्व र आवश्यकतालाई बुझेनाैँ भने इन्डस्ट्री अघि बढ्ला भन्ने मलाई भने लाग्दैन । र, अहिले जो साथीहरु कराइरहनुभएको छ, समीक्षकहरुलाई गाली गरिरहनुभएको छ म लेखेर भन्छु १५ वर्षपछि उहाँहरु इतिहासको गर्तमा कहाँ बिलाउनुहुन्छ, थाहा हुने छैन । समीक्षकहरुको आलोचना आत्मसात गर्न सक्नुभयो भने तपार्इंको विकास नै हुन्छ । निमिट्यान्न भएर जाने अवस्था हुन्न । समीक्षकको आलोचना सुन्यो भने पनि के सुधार्नुपर्ने रहेछ, थाहा हुन्छ नि ! जस्तो तपार्इंले मलाई इन्टरभ्युको सुरुवातमै अहिलेसम्म फिल्म बनाउन नसकेको भन्दै आलोचनात्मक प्रश्न गरिरहनुभएको थियो । त्यस्ता प्रश्नले त मलाई सोच्न बाँध्य बनाउँछ नि, साँच्चै हो कि क्या हो ! भलै मैले तपार्इंलाई ‘होइन, यो है’ भनेर प्रतिवाद गरे पनि कम्तीमा मलाई मैले नियमित काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बोध त गराउँछ नि !
पछिल्लो समय महजोडी (हरिवंश आचार्य र मदनकृष्ण श्रेष्ठ) जस्ता कुनै समय समाजप्रति निकै जिम्मेवार देखिएका कलाकार पनि सस्ता कमेडी फिल्म निर्माणमा सक्रिय देखिएका छन् । यसलाई कसरी लिइरहनुभएको छ ?
वर्गोत्थान भएर हो कि ! वर्गोत्थान भएपछि मान्छेको दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन हुनु स्वाभाविक मानिन्छ । केही चलचित्रकर्मीको वर्गोत्थान भएको छ । उहाँहरु जुन समाजमा जुन वर्गका रुपमा रुपमा हुनुहुन्छ, चलचित्रमा त्यसकै रिफ्लेक्सन भइरहेको छ । यसको अर्थ त्यो वर्ग खराब भन्न खोजेको भने होइन है । हिजो उहाँहरुले जुन रुपले समाजप्रति उत्तरदायी भएर समाजलाई अघि बढाउने काम गरिरहनुभएको थियो, त्यो प्रशंसनीय थियो । अहिले के संकट आइपरेको हो, मलाई थाहा भएन । अहिले फेरि बजारका लागि किन कुद्नु परेको हो, थाहा भएन ।
केही अपवादलाई छाड्ने हो भने अहिले नेपाली सिनेमाको एक्टिङ भित्तामा टाँसिएको पोस्टरजस्तै भइरहेको छ । कलाकारको अभिनयमा कुनै जीवन पाइँदैन । सहमत हुनुहुन्छ ?
अहिले फिल्ममा एक्टिङ गरिरहेका धेरैजसो थिएटरका छन्, दुई चारजना हिरो–हिरोइनका छोराछोरीहरु छन् । कोही सिकेर आका छन्, कोही अनुभव लिएर । कोही वंशानुगत लिएर आएका होलान्, यदि त्यस्तो हुन्छ भने । खासमा अभिनय सिक्ने कुरा हो । अभिनयमा सिकाइको लामो अभ्यासहरु भएको छ । त्यो अभ्यास हाम्रोमा छ । अभिनय सिकाउने नाममा दुई चारवटा नाङ्लो पसल छ । प्रत्येक थिएटरवालाले एउटा–एउटा नाङ्लो पसल खोलेका छन् । एउटा राम्रो थिएटर स्कुल किन छैन त ? नाटकसम्बन्धी कलेज किन छैन ? हाम्रा थिएटरवालाहरुले किन पहल गर्दैनन् ? अथवा, स–साना पसल चलाउनेहरुले संयुक्त मिलेर एउटा स्कुल किन खोल्दैनन् ? स्कुल खोल्यो भने आफ्नो पर्सनल बिजेनस सुक्छ । सायद समाजकै प्रतिविम्ब भएर होला, हामी यति स्वार्थी हुँदै गयौँ कि आफूबाहेक अरु देखिरहेका छैनाैँ । जस्तो, एउटा मास्टरको फिल्म स्कुल खोल्यौँ भने त सारा इन्डस्ट्री उठ्न सक्छ नि ! धेरैजसो अधकल्चो ज्ञान लिएर एक्टिङमा आइरहेका छन् । केही समय कोर्स गरेर आएको भरमा एक्टिङ गर्न सकिने होइन नि ! भूमिकाअनुसार नियमित प्रशिक्षण गर्नुपर्ने हुनसक्छ । अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुनसक्छ । बाहिरतिर हेर्ने हो भने ठूल्ठूला प्रयोगहरु भइरहेका छन् । नेदरल्यान्डको फिल्म स्कुलले शरीरको अंगहरुको माध्यमबाट आफूलाई अभिव्यक्ति गर्ने भनेर नयाँ अभ्यासहरु थालिरहेका छन् । अभिनयका मामिलामा बाहिर निकै गम्भीर र कलात्मक प्रयोगहरु सुनिन्छ । रोल तयारीका लागि कलाकारले धेरै मिहिनेत र थप अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेको खबर बाहिर खुब सुनिन्छ । यहाँ त्यस्तो केही छैन । सायद अभिनयमा जीवन नहुनुको कारण पनि यही हो ।
‘अहिले नै धेरै ओपन हुन तयार छैन’
हिरोइन नै बन्ने हो (लामो सास तान्दै) तर अब अभिनयका लागि लिड भूमिका नै हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन। क्यारेक्टर बलियो भयो भने अनि राम्रै ब्यानरबाट अफर आयो भने त गर्नै पर्छ।
सन् २००७ मा फिल्म ‘सानो संसार’बाट रजतपटमा डेब्यु कलाकार कर्माले त्यसपछि पछाडि फर्कनुपरेन। १२ वर्षदेखि उनी इन्डस्ट्रीमा सक्रिय छन्। रंगमञ्चमा पनि उनको छुट्टै क्रेज छ। उनी अभिनित फिल्म समीक्षात्मक रुपमा समेत रुचाइएका छन्।
‘‘दासढुंगा’बारे किन मौन भनेर राष्ट्रपति– प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नै नपाउने ?’
निर्देशक कुमार भट्टराईले हैरान छन् अहिले। हैरानीको कारण हो, उनले निर्देशनको तयारी गरेको फिल्म ‘दासढुङ्गा २’ को अनुमतिपत्र नपाउनु। फिल्मको सबै तयारी सक्किइसक्यो तर चलचित्र विकास बोर्डमा गएर अनुमति अड्कियो। अनुमति पाउन चार महिनादेखि दौडधुप गरिरहेका छन् तर उपलब्धि शून्य।